Dzidziso kune jailbreak iOS 9.0-9-0.2 | IPhone nhau
Dzidziso kune jailbreak iOS 9.0-9-0.2
Pangu yakaparura chishandiso rinopfuura awa rapfuura kugadzira iyo jailbreak kumidziyo ine vhezheni ye iOS 9.0 kusvika iOS 9.0.2. Maitiro ekuita jailbreak anonzwisisika, kupfuura chokwadi chekuti isu tinokumbirwa kuwana reel yemapikicha (aya maChinese ...), uye akafanana nemamwe maratidziro ejeri atakaita kusvika nguva pfupi yadarika. Dambudziko nderekuti, senguva dzose nezvishandiso zveChinese, iyi vhezheni 1.0 yePangu Jailbreak 9 inowanikwa chete kumakomputa ane anoshanda system WindowsKunyangwe hazvo Mac vhezheni ingango buda munguva pfupi kupfuura zvaita TaiG. Tevere, isu ticha tsanangudza matanho ekutora kune jailbreak iOS 9.0-9.0.2
1 Maitiro ekuita jailbreak iOS 9.0-9.0.2
1.1 Midziyo inoenderana
1.2 Zvakatora matanho
1.3 Matanho ekutevera
Maitiro ekuita jailbreak iOS 9.0-9.0.2
iPhone 4s, iPhone 5, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 6 / Plus uye iPhone 6s / Plus
iPad mini 2, iPad mini 3, iPad mini 4, iPad, iPad Mhepo, uye iPad Mhepo 2
Kana iwe ukasvika pano uchitarisa kuJailbreak iOS 9.1, zvishandiso zvinotsigirwa zviri 64-bit chete.
Isu tinoremadza Tsvaga yangu iPhone kubva kuZvirongwa / iCloud.
Isu tinoremadza Kubata ID uye kodhi kubva kune ako marongero ane zita rimwe chete.
Isu tinoisa yedu iPhone, iPod kana iPad mune ndege nzira.
Isu tinotora Pangu Jailbreak kubva pawebhu en.pangu.io
Isu tinorova bhatani re "Kutanga" uyezve "Rava negadziriro yeparutivi" kana sarudzo yacho yaonekwa.
Iyo iPhone, iPod kana iPad inotangazve uye itiudze isu kuti tiidzorere zvakare mune yendege modhi. Isu tinoita uye maitiro anoenderera mberi.
Mushure mechinguva, isu tinozobvunzwa kubata iyo Pangu application pane yedu yekumba skrini yedu iPhone, iPod kana iPad. Tinoita.
Tevere, isu tinozokumbirwa mukana kune yedu reel (?) Isu tinopa iyo kuti igamuchire.
Iyo chishandiso ichatangazve uye isu tichava neCydia yakaiswa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Jailbreak » Dzidziso kune jailbreak iOS 9.0-9-0.2
Hapana chikonzero chekuti iTunes ivhurike?
Carlos Rincon akadaro
hapana shamwari, zvirinani kuti ini ndatoita iyo JB uye ndiri kuita zvakanaka, izvozvi kurodha pasi mamwe ma tweaks kuyedza. Parizvino handiwani zvikanganiso. Chaizvoizvo imwe ine iyo keyboard, haudi kunyora mushure mekuvhura nekuvhara iyo whatsapp app asi kuivhara mune yakawanda inogamuchira iyo.
Pindura Carlos Rincon
Carlos, wanga uine JB IOS 8? Wakaiisa pamusoro here? Ndatenda.
Ini ndanga ndatova neJB ine iOS 8.4, zvandakaita kudzoreredza yangu iPhone ku9.0.2, uye nekuchenesa iyo JB, ndobva ndaisa backup yangu kopi uye zvese zvinobva gumi! Ini ndakatozviziva kune yangu iPhone 5s, uye 6plus ese ari maviri akakwana, ndiri kuenda nemuzukuru wangu 4s kusvika parizvino zvese zvakanaka.
Ndatenda, ndichaedza, ndave kutoita backup, wakaita sei neiyo tweak? Wakaikopa sei?
ikozvino kana ndichigadzira backup ndinonzwisisa kuti ndanga ndichiteedzera zvinyorwa uye tweaks sezvandinoyeuka nenzira imwecheteyo ini handina kupasa kopi uye ndiri kuisa dzandaishandisa, dzakadai saFlux neWhatsapp ++ izvo zvatovandudzwa uye shanda pasina dambudziko, ndiudze kuti ndeapi avanokufarira uye ndinotarisa kuti ndeapi anoshanda kana uchida.
Ndatenda Carlos, ini ndiri kunyanya kufarira kuenderana kweiyo JB neiyo itools kana iyo pp25, kuti ndikwanise kupasa izvo zvinoshandiswa, iyo activesync, wakamboedza kuisa kunyorera kuburikidza neactivesync? Inoshanda here?
ndingaitewo here jeri kubva kune yangu iphone 6 ndinoiitawo ?? kana ndinofanira kuzviita kubva pc ini ios 9.0.2, ndatenda !!
murume, iwe unoda pc kuti uzviite.
Yangu cydia inovhara, nei zvichiitika?
Adolfo Garcia akadaro
Zvinoitika kwandiri kuti Cydia haivhure asi application yandaive nayo kubva kune imwe jailbreak inoshanda
Pindura Adolfo García
Mhoroi, ini ndaita zvese maitiro uye zvakanaka asi kana ndapedza zvese ini handioni cydia yakaiswa, chete mapangu ekushandisa. Chinhu chimwe chete ichi chinoitika kwauri? chero mhinduro? Ndatenda
Nekem, dzorera chako chishandiso kubva pa0, gadzira kopi uye wochidzorera neIOS 9.0.2 usingapfuure kopi, iwe uchiri kuita iyo JB, uye mushure mezvose zvanaka, dzoreredza kopi yako, zvakadaro unogona kuitazve iyo JB maitiro nekuidzosa Ngatiedzei, zvakaitika kwandiri neJaig taig mushanduro dzakapfuura uye ndakaidzorera zvakare nekudzvanya kutanga apo Cydia isina kubuda, edza uye utaure.
Mhoro, wakateedzera sei tweaks?
Wakazvigadzirisa zvakadaro here?
Ini handitore iyo tweask marongero kubva kune ekugadzika app…. mumwe munhu anoziva kwavari?
Ini ndichaedza kuona zvinoitika !!!
Pindura kuna Charny73
Ndatenda Carlos asi kechitatu yakabuda
Mhoro! Mubvunzo uriko unoti unoenderana kubva kuPad ​​Mini Mini 2, ndiko kuti, iyi jailbreak haienderane neyekutanga? Kunyangwe kana ndiinayo paIOS1?
brown raccoon akadaro
Ini ndinofunga pane dambudziko nekunakidzwa kurodha kana mobile substrate mune ino jailbreak, nekuti kana zvese zvangoiswa zvakanaka, iwo ma tweaks aunoisa mu cydia haatarike muiyo ios control panel (marongero)
mumwe munhu ane dambudziko iri?
Chinhu chimwe chete ichi chinoitika kwandiri sewe, ini handizive kana iko kukundikana kwejeri kana kuti kuchine tweaks inoenderana neIOS9 ...
Pane chatinoziva here nezve iyo jailbreak ye8.4.1? Ndiri kufarira yangu iPhone 5S. Ini handidi kumutsiridza kune iOS 9.
Kana yakatobuda kune ese mavhezheni eIOS 9 ini ndinokahadzika kuti ichazobudira chero vhezheni yapfuura uye kuti yanga isina
Iwe wakachengetedza sei iyo cydia tweaks?
Rangarira kuti iyi ndiyo yekutanga vhezheni, mukufamba kwevhiki matambudziko ese achagadziriswa, tiri kuva vanoedza mune ino kesi, kutaura zvishoma, handina dambudziko kubatsira chero anochida, Skype: khpw_1
Cydia yakavharwawo kwandiri !! Zvinonyadzisa zvakadii
Louis V akadaro
Hazvindibvumidze kuzviita pane iyo Mini Mini 2 kana iyo i6 + (zvese zviri ne9.0.2). Iyo PC app inosvika 100% backup uyezve kana ichigadzirira nharaunda inoburitsa 0A kukanganisa pa45%.
Iyo shit, isu tichafanirwa kumirira yekugadzirisa kuti tigadzirise.
Pindura kuna Luis V
pinda itunes pane pc uye dzimise iyo iPhone yakavharidzirwa backup bhokisi, yakandipa iko kukanganisa uye ini ndakatoita iyo jailbreak kusvika pakukwana
Ini ndoda kuzviita neiyo yakadzoreredzwa iPhone asi zvino ndinoisa sei iyo backup kopi kana kuti ndinoiisa sei? Ndatenda
Ivo vane matambudziko kudzoreredza nekuisa kubva ku0
Iyo app haisati yabuda mune zvigadziro asi dzikama
Nezve iyo kopi
Mushure mekuita iyo JB dzorera yako kopi senguva dzose ichaita
Mhoro, wakadii? Ndine iPhone 6 uye ndinayo ne iTunes uye tambo pese pandinoibatidza uye pese pandino gadziridza kana kudzorera ndinowana kukanganisa 53, mumwe munhu anoziva kana ndichigona kuita chimwe chinhu kana kwete. Kubva ndatotenda zvikuru kwazvo
Dzorerazve iTunes uye kana ikasashanda, shandisa imwe pc dambudziko iri rinogara riri pc, kuyedza imwe mhinduro iri nani, tiudze kuti wakadii?
Pindura kuna Carlos rincon
Akaisa jeri pasina kana dambudziko rimwe chete pane yangu iPhone 6 asi kana kurodha pasi chero tweak hakushande kana kuoneka mumasetingi, kutadza kwejere kana tweaks kuenderana kutadza? Ini ndinofunga ndichadzorera uye ndirambe ndisina mutirongo kusvikira zvanyatsogadzikana, kana paine munhu ane ruzivo nezve kutadza kutaura kudaro! 🙂
Dumburidzo (@jumburdalo) akadaro
cydia tb yakavharwa kwandiri. zvakanaka hazvo kuti inovhara, ndeyekuti hairegi kupinda.
Pindura kuna Mudito (@jmburdalo)
Iwe unonetsekana, kana iwe ukamirira vhiki, ivo vanozoburitsa yekugadzirisa kugadzirisa bugs uye iwe uchaita iyo JB pasina matambudziko.
Ngatione kuti ndiani wekutanga kunyora achiti ivo havazokubvumidze iwe kumisikidza chishandiso kana chena skrini ... zvinoenda!
Zvirinani kumirira mazuva mashoma, zvishandiso izvi hazviwanzo kubuda kutanga kushanda 100%
Raul Delgado akadaro
Cydia inondivharirawo pandangovhura kekutanga, unogona here kutibatsira, ndatenda
Pindura Raul Delgado
Ndichiri kuputsika mujeri muIOS 8.3, ini ndichamirira kusvika Ndira kana Kukadzi kuti Apple igadzirise mabugs eios 9 ndobva ndaipaza.
Mhoro; Kana Cydia yakavharwa, iyo iPhone inotangazve uye zvese zvakajairika. Zvirinani kwandiri pane yakasarudzika iphone 4s.
Hazvipindirani nePadheni MINI 1 ???????
Chokwadi hongu, asi ios 9 yakakunakira iwe pane ipad mini 1? Ndakagadzirisa yangu ipad mini 1 Ndakanga ndisingadi uye ndakafunga kudzokera kuIos 8.4, urikuita sei?
Jailbreak inoshanda pa100% pa iphone 6+ cidya ok inongoda kumutsiridza zororo.
Shamwari, appsync inoshanda kwauri here? Ini ndinoedza kuisa mamwe mafomu andaive nawo uye zvinondipa kukanganisa.
shamwari, iyo cydia haina kupinda ipad yangu 4 .. pese pandinoyedza zvinondiburitsa
Zvichaita izvozvo noooo !!! Sezvo isu takatarisira iyo 9.1 YEMHURI MHINDURO YETSAPP UYE IYO IYO INOSHANDA MUAPLELEY WATCHH YEMAHARA !!! XD
Jailbreak yakaitwa zvinobudirira nefoni yangu 6 pamwe, cydia ichishanda zvakanaka nevamwe, saka zvese zvaive zvakakwana. Iti ndinochengeta yangu icon asi ndodzima uye ndizvozvo. X fiiiiiin !!!
Zvakanaka, ini ndakangoisa zvese zvakakwana uye kana ndikapa cydia kuti ivhure, inovhara ipapo uye haindibvumidze kuti ndipinde, ndapota batsira
Mikea rc akadaro
Ndiri kuedza kuvhura iyo faira asi ini ndinowana iyi kukanganisa "kwete inoshanda win32 application" pane mumwe munhu angandibatsira here?
Pindura Mikea RC
colonel segio akadaro
Kwazisai munogona kundibatsira ndapota, ndine yangu Ipad mini ine iOS 9.0.2 Ini ndatoisa iyo jailbreak yakaiswa cydia asi ini ndoda kuisa iyo WhatsApp semumwe munhu aive nayo achiziva kuzviita nhanho nhanho nekuda kwerubatsiro rwako rwakanaka gare gare .
Pindura segio colonel
Pandakashandisa whatsapp pane ipad ndakazviita nenzira inotevera. Ini ndakaisa iyo tweek whatspad ndokuzoisa whatsapp nekukopa iyoipa kubva painternet nekuiisa ne pp25 kana itools, nekuti kurodha pasi zvakananga kubva kustorestore kwaisagona kuitwa. (1 gore rapfuura)
Sei panguini ichida kuwana iyo mifananidzo? Kana ndikasabvuma, zvinondipa kukanganisa. Unoziva here kuti nei vachida kuwana iwo mafoto?
Vaya imi mune matambudziko necydia, HAZVINOFANIRA KUDZOKESHA FIRMWARE nekuita jaibreak nhanho zvakare zvakakwana, zvisati zvaitika, buda muicloud uye pakati pejaibreak, painokukumbira kuti uvhure iyo Pangu app, vhura iwo mapikicha eapp musati. Aya ndiwo maitiro andakazozviita ini mushure mekuyedza kwakawanda
Pindura kuna Joe
Yakandishandira pandakavhura iwo mapikicha app zvakaringana mushure me4 isina kubudirira kuedza. +1 😉
Pindura kune leekhaz
Joe, wakazviita sei? Pandinoyedza kuzviita zvakare, zvinondiudza kuti kupunzika kwejeri kwapera, uye ini ndoda kuzviita ndisina kudzorera kubva ku0.
Hi Andrés, kunyange zvazvo pangu ichiziva foni nejaibreak, kudzvanya pabhatani rekutanga bhatani kunotanga maitiro zvakare.
Ndine Iphon 6 ine yekupedzisira yekuvandudza uye inondipa iyi kukanganisa Kanganiso YAKAITIKA MUKUGADZIRA NZVIMBO ER CODE OA mumwe munhu anogona kundibatsira
Dzima backup yakavharirwa muTunes: "Kana iwe uri kuwana kukanganisa 0A uchiri kupaza jeri, dzima sarudzo ye" Encrypt backup "mu iTunes pasi pe" Summary "peji reiyo kifaa chako cheIOS." https://www.reddit.com/r/jailbreak/wiki/ios9jailbreakhelp
Thanks joe I am going to uninstall iTunes, zvinoitika ndozokuudza ndatenda
Unogamuchirwa! Isa kana iwe uchikwanisa yazvino vhezheni yeTunes uye painoti Gadzira backup otomatiki, uncheck iyo Encrypt iPhone backup bhokisi, kuti uone kana izvozvo zvinogadzirisa kukanganisa.
Ini handisi kuona akaisirwa tweaks musarudzo sarudzo, pane chero munhu anoziva kugadzirisa izvi? Ndatenda
Maminetsi mashoma apfuura iyo yekuremerwa inodiwa yakagadziridzwa iyo inotobvumidza iwe kuti uone iwo ma tweaks mune marongero
Pindura kune stucka1
Mhoroi, ini ndinowana iko kukanganisa ERROR OCURRENT MUKUGADZIRA ENVIRONMENT ERR CODE OA uye vakandiudza kuti zvakafanira kudzima iTunes backup mune crypts, mumwe munhu anoziva kuzviita ndatenda
Ndakatozviita uye zvinoshanda nemazvo. Ini ndaifanirwa kuita kudzoreredza sezvo ini ndawana kukanganisa, nekuita saizvozvo ini ndakakwanisa kuita iyo jailbreak nekukurumidza!
Blad castell akadaro
ndaita jailbreake zvese zvakanaka, vhura cydia uye isa ma tweaks asi kana ini ndichida kubata mashandiro ayo kubva kumagadzirirwo iwo andakaisa haawoneki, pane chero munhu ane tsananguro yeizvozvo?
Pindura Blad castell
Sei iwe uchikumbira kuwana kune reel kuti ugone kuisa cydia? Kwakachengeteka here?
Wakaisa iyo vhezheni pane yako iphone kubva pc kubva itunes kana iphone kuburikidza ota?
Ndine iphone 4s uye ndinoita nhanho dzese dzainotaura asi painobhadharisa 55% ndinowana mhosho inoti «Kanganiso yakaitika mukugadzirira nharaunda, kukanganisa kodhi (0A)
Ndiregerere ... yakaiswa yakabviswa ???
Ignacio Del Pino (@Benjaminplaguee) akadaro
Mushure mekunge ndavhunika, chii chandinoita kuti ndiise zvinoshandiswa?
Pindura kuna Ignacio Del Pino (@Benjaminplaguee)
Teo Corsa akadaro
Mubvunzo kana ndikadzima panguwa yekushandisa, mushure mekunge ndarongedza zvese zvakanaka uye ini ndatova necydia, chimwe chinhu chinoitika?
Pindura Teo Corsa
Ini ndinowana kukanganisa kana ikaenda ku70% uye inondiudza kuti ine kukanganisa (55), chii chandingaite kuti ndigadzirise?
mukomana fernandez akadaro
Mumwe munhu anogona kubatsira nekanganiso 55, ini ndakaiwana uye handina kukwanisa kuiisa nekuti hazviitike kubva ipapo, maita basa
Pindura kuna chico fernandez
Kungave kuti iwe unofanirwa kubhadhara? Kana pane chero munhu ane chero kodhi yekuisa mukati? Ndiri mutsva pane izvi !!
Kwaziso, maappync anoshanda here kwauri?
Ichokwadi, kukanganisa 55 kunobuda, ini ndinowanawo uye handizive zvekuita, mumwe munhu anoziva chinhu
Pindura kuna stefan
Mhoroi, ndagadzira iyo JB pane ipad Mhepo, zvese zvakaringana, ini ndinoisa APPCAKE, asi pandinodhawunirodha app ndobva ndaiisa, hafu yezvikumbiro, iyo appstore, foni, mameseji, nezvimwe zvadzimwa.Ini ndiri kuitei zvisizvo?
Ndakaita jeri kaviri, ini ndinoisa zvese zvakanaka, cydia ine repos yayo nezvose asi kana ndikatangazve foni inogara pablock, munhu ane dambudziko iri?
Foni yangu iri iPhone 6s
Ysai torres akadaro
Mhoroi, pane chero munhu anoziva kana ndichigona Jailbreak chishandiso changu kana ndikachigadzirisa kuburikidza neOTA? Kana ndinofanira kuisa iOS zvakare
Pindura Ysai Torres
Steb @ n akadaro
Inoshandira IOS 8.4.1…. ???? NDATENDA NEMHINDURO
Pindura kuna Steb @ n
inoshanda IOS 9.1, BETA 5 ????
Mangwanani mangwanani ini ndinowana iyi kukanganisa Error yakaitika mukugadzirira nharaunda, kukanganisa kodhi (55)
Pindura kuna eduardo
Manheru akanaka ini ndinoshandisa Mac uye ndaifanira kukwereta hwindo uye pandakakopa PANGU yewindows pandakabatanidza iyo iPhone 5, PANGU haina kundiziva uye ndaifanira kurodha pasi iTunes uye ipapo ndakabudirira Jailbreak
Mhoroi, ndakaisa verison kune ios9.0.2 uye ndikagadzira kupunzika kwejere asi ikozvino pese pandinoedza kuisa Anwendung, ini ndinowana verification yakundikana poster pane itools 3.0.
Kune avo vanowana kukanganisa 53, chinhu chimwe chete chakaitika kwandiri uye zvandakaita kumhanyisa iyo Pangu munzira yekutonga (kunyangwe zvakadaro, yakawonekazve asi kechitatu payakaedza kuve 100%, ini ndatoona mune mamwe maforamu kuti zvimwe chete zvinoitika, ingoedza kakawanda kusvikira zvaramba.
Mhoroi, pekutanga mushure mekuyedza kwakawanda handina kuwana cydia, asi zvatova, pakati pechiitiko, painokukumbira kuti uvhure chirongwa chepangu pane iphone, ivo vanotanga kuvhura iwo mapikicha app vozoita pangu uye ndizvozvo, zvese zvakanaka.
Mhoroi ini ndatova necydia asi pandinenge ndichida kurodha tweaks iyi kukanganisa kunoonekwa: SUB-PROCESS / USR / LIBEXEC / CYDIA / CYDO YAKADZIDZISA KUKOSHA KODZERO (2)
Ndine dambudziko nesafari ichidzokorora kurodha peji, zvinoitika zvakafanana kune mumwe munhu?
Andi Guti akadaro
Mhoroi, mumwe munhu anogona kundibatsira ndapota, ndinoedza kuisa JB pane yangu iphone asi ndine dambudziko mushure mekunge yati "Kuisa JB zviwanikwa" inondibvunza kuti ndibatanidze iphone yangu, pane chero munhu anoziva kuti dambudziko iri riri kukonzerei? Ndingafarire kana iwe ukakwanisa kundibatsira.
Pindura Andi Guti
Zvese zvinhu zviri kundifambira zvakanaka, kudzamara ndadzorera. Ndokureva. Kana ndichinge ndaita jailbreak ini ndaisa zororo, ini ndinoisa inoenderana tweaks (activator haisati yave), ndinodzoreredza, asi mubvunzo ndewokuti inodzosera zvairi kuda. Ndine zvakawanda zvavo pasina kuisa, kungave kwakabhadharwa kana kuyedzwa. Ndakaisa "apple file ... 2", "appsync 5 to 9" zvichingodaro uye hazvizive iwo maapp. Nekudaro, mamwe ndaigona kuaisa ne "ruoko".
Kutenda uye ndine urombo neiyo tirade.
Ferdi, ndinokutendai zvikuru nekupindura pamusoro pazvo, ndazvidzorera uye zvazopedzisira zvaiswa co ndinokutendai zvikuru !!!
kana iyo JB yaitwa, ichatora yakajairwa cydia kana?
Ndakaita iyo jb ndisina kusvikira cydia yabuda uye kuti yakavhurwa nekuvharwa sei, ndakaverenga kuti zvinogona kuitika uye ndakazviisa kubva kufekitori, uye ndichida kuziva pandinozviisa kubva kufekitori id yangu haisisipo uye a s… .. @ yahoo.com Uye haisi yangu, hapana chandinogona kuita, ndinoda rubatsiro, ndinewo invoice yekutenga uye garandi, asi handizive kana pandinoitora kuappel vanotaura chimwe chinhu. Ndatenda
pane chero munhu anoziva nei cydia inovhara chete painoti (kugadzirira filesysten) ???
Izvo zvinondibatsira zvinongogara pa15% mushure mekuisa 100% ye backup mushure mekunge yatangazve, ndakaiisa mumhepo nendege zvakare uye inongondiudza kuti ndibatanidze chishandiso ndoitange uye kubva ipapo hapana rubatsiro futi
Juan Angel Osorio akadaro
Kwaziso kubva kuMexico ndaedza kuita JB pane mac yangu nemichina 3 dzakasiyana, windows xp sp3, windows 7 sp1, windows 8, uye pangu haina kuona iphone yangu, pane chero munhu anga aine dambudziko iri?
Pindura Juan Angel Osorio
Izvo zvinondipa kukanganisa pane ipad 2, yakadzorerwa seyatsva, kana ndasvika pa65% uye kuti ndakavhura pangu mumaneja modhi sekutaura kwavo kunze uko, zvinondipa kukanganisa kodhi 51, mumwe munhu anoitika?
Mhoro ita basa. Zvakarurama asi mushure memazuva mashoma. Ini ndakakanganwa ndikadzoreredza chishandiso nemaoko uye chakazosungirirwa pane block. Pane chero nzira yekuzvigadzirisa?
Mhoro munhu anogona kundibatsira ndine dambudziko ne whatssap ++ v1.6r-18 ios9.0.2 Ini handigone kugamuchira zvakavanzika asi boka whatssap kana mumwe munhu achiziva mhinduro ndatenda
Ini ndiri mutsva ku iPhone uye ndinoda kurodha pasi cydia nekuisa panguwa asi pandinoivhura ndinowana mhosho kubva pane zvandakaverenga ndinofanira kurodha pasi iTunes asi handizive kuti ndozviita sei, zvinogona kundibatsira
Inogona kuiswa paBlackBerry Z10?
Catrachito Mejia akadaro
Mhoroi, ndine alcatel androy asi handikwanise kudhawunirodha whatsapp, inongotora 55% chete uye inoita kunge yakafanana uye haifanire nezvapfuura
Pindura Catrachito Mejia
Yangu whatsapp haina kutorwa pasi, 55% chete inotorwa pasi uye ini ndinogadzira yekuvandudza uye haina kugadziridzwa
Pangu anoburitsa isina kubhadharwa jeri kupaza kweIOS 9.0-9.0.2